Haqa Namaa Dharaan Jal’isuun Haqa Namaa Jallifti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHaqa Namaa Dharaan Jal’isuun Haqa Namaa Jallifti!
Lammii Oromoo irraa | Muddee 01, 2019
Dhugaa irra ijjatanii dhara ol kaasuuf harkisuun cubbuudha. Firii namni biraa ifaajee argamsiise saamanii handhuurfatuun badiidha.
Qabsoo Oromoo bilisummaa fi walabummaaf waggoota dheeraaf geggeeffame gatii dhabsiisanii qabsoo waggaa lamaa dhaadhessuun amala fageessanii yaaduu dhabuuti.
ABOn qabsoo bara dheeraaf godhe keessattis bu’aan buuse guddaa tahee osoo jiru ilaalchi har’a namoonni firii inni oomishe saammatan ija hamaan ilaalaa jiru.
Qaanyii malee Oromoo bilisoomsine jedhanii dhaadatu. Kan wareega ol aanaa baase ABO garuu ciqileen qabatanii mittiguu barbaadu.
Kan nama ajaa’ibu garuu bilisummaa fidne jedhan saamane jedhanii iyyuu eegaluu isaaniiti. Haqa nama biraa saamanii namni biraa deebi’ee isaan irraa saamuun waan isaan laallessu hin qabu.
Raafuun abbaa guure mararti malee nama hin guuriniif wayuu miti. Qabsoo wareegama lubbuu baay’een har’a geette balleessuuf har’allee duulle itti baname ulfaataadha.
Akkuma kaleessa ABOn qabsoo bacancarsaa ture malee qabsoo sonaa godhe hin qabu jechuun fudhatama isa dhabsiisuuf yaalaa turan ammallee dhaaba dhalcha Wayyaanee OPDOn walitti bikkuu barbaadu.
Wal tajjii gara garaa irratti OPDOn Nafxanyatti ABOn Wayyaanetti irkatanii qabsoo Oromoo gufachiisaa jiran jechuu barbaadu.
Dhara guddaa dubbachuun isaanii dhaaba saba isaaf waggaa dheeraa qabsaawaa turee fi ammas qabsaawaa jiruu fi isa waggaa 30 ol ummata Oromoo fixaa fi ficcisiisaa ture waliin madaala tokko irra kaahuudha.
Qerroo Bilisummaa Oromoo kan utube ABO ta’uun osoo beekkamu akka waan ofii hundeessaniitti ofiin himuun mataan isaa yakka guddaadha.
Nama lubbuun qabsaawee fi nama oduun qabsaawe gatii wal qixa kennuufiin dogongora hamaadha.
Qabsoon oduu gurgurachuun godhamu xumurri isii hin tolu..allattoon itti baha isii kunoo muldhatee jira. Bilisummaan du’a qofaan argamtu igitii akka hin qabne hojiidhaan argamee jira.
Kan nama ajjeesu ajjeesuun of irraa hambisuun bilisummaa waartuu nama gonfachiisa. Harka duwwaa karaa irratti bahanii iyyanii du’uu qofaan biyyi ijaaramte seenaa addunyaa keessatti hin jirtu.
Oromoon du’uu qofaan mirga ni gonfata jedhanii odeessuun qofti furmaata hin tahu. Furmaatni humna namaan lolu caalanii ykn gitaniinii argamuudha.
Nagaya jaalachuun qofti nagaya nama hin gonfachiisu. Humna qabaachuun,qabeenya qabaachuun, beekkomsa qabaachuun, jabina qabaachuun waa hundaafuu murteessaadha.
Sab-qunnamtii qofaan falmachuun gahaa miti. Ummatni keenya adeemsa qabsoo isaa irra deebi’ee ilaallatee sirreeffachuu qaba. Nama dhuunfaa ykn murna hagoo faana usee girrisuu kana irraa guddachuu qaba.
Daba ABO irratti dalgame hedduu keessaa qabsoo bara danuuf geggeesseef galata muldhataa akka hin arganneef humna Qerroo inni bu’uuree qabseessee irraa saamuun kan ofii taasisuun kun ummata keenyaaf galuu qaba.
Cubbuu dhaaba kana irratti dalgametu har’a qaamota dhaaba kana irratti cubbuu dalagan irratti dalagamaa jira.
ABOn dhugaa guddaa qaba. Sababa shirri irratti hojjatameef har’a deeggarsa horii hin qabu. Akka hin gargaaramne kan dhoorge murna asii olitti eere kana.
Ummanni kenya daba kana beekee dhugaa fana bahuu qaba. Dhaaba isaas deeggaratuu qaba.
Filmaata dhufu irrattis dhaaba isaa filachuu barbaachisa. Kun hafee namoota dhuunfaa warra odeessaan qabsawan ni filata taanaan salphinatti harka kennachuu taha.
Kanaaf ABO karaa cufaan deeggaruun kaayyoo isaa kan mirga hiree murteeffannaatti milkaahuuf halkanii guyyaa tokkummaan socho’uu barbaachisa.
Qaamonni hanga hin geenne gahuuf hiixatanis gocha diiggaa kan dhaaba kana milkii dhoorguuf carraquu irraa of qusachuu isaan barbaachisa.
Walii galatti qabsoon ummata keenyaa akka galma gahu dhalli Oromoo wal dura dhaabbachuu lagatee wal bira dhaabbachuu maxxanfatuu qaba. Waan hunda irra ummanne keenya onnee gootummaa hidhate daran jabeeffachuun gara fuula duraatti furga’uu qaba.
Bilisummaa fi walabummaan dhugaa ABO qofaan dhugooma!
Ajjeechaan Aadde Biraanee Maammoo Dhala Namaa Hundaan Balaaleffatamuu Qaba (Ibsa ABO - Adoolessa 25, 2018)…
Wixinee Mirgi Namaa Itiyoophiyaa Akka Kabajamu Gaafatu Mana Maree US Keessatti Sagaleen Irratti Kennamuuf jira…